भिमार्जुन आचार्यको प्रश्नः ऋण लिएर भए पनि संघीयता कार्यान्नवन गर्नै पर्ने बाध्यता के हो?::
भिमार्जुन आचार्यको प्रश्नः ऋण लिएर भए पनि संघीयता कार्यान्नवन गर्नै पर्ने बाध्यता के हो?
काठमाडौँ – संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यले संघीयता कार्यान्वनकाका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था मुलुकका लागि अत्यन्त लज्जाको विषय भएको बताएका छन् । उनले शासन व्यवस्थामा नै लगानी गर्न पाउने मुलुक दाताहरुका लागि दुनियाँमा अर्को नभेटिने बताएका छन्।
उनले शासन व्यवस्थाका लागि विदेशी ऋण लिए राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वायत्तता धरापमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक टिप्पणी लेख्दै आचार्यले संघीयता कार्यान्वनका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामक अवस्था किन आयो भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् ।
‘आफ्नो औकात र क्षमताले नभ्याउने व्यवस्थालाई अरुको ॠण र अनुदान मै भएपनि चलाउनै पर्ने वाध्यता के हो?, आचार्यले प्रश्न गरेका छन् । उनले व्यवस्था कार्यन्वयनको चार वर्षमै यो हबिगत देखिएको भन्दै नेपालमा संघीयता धेरै समय टिकाउन गाह्रो पर्ने संकेत गरेका छन् ।